Twingeo waxay bilaabaysaa Daabicdeeda 4aad - Geofumadas
Twingeo wuxuu soosaaraa Cadadkiisa 4aad
Ogast, 2020 dhowr
Waxaan la nimid sharaf weyn iyo qanacsanaan leh daabacaaddii 4-aad ee joornaalka 'Twingeo Magazine', xilligan xaadirka ah ee qalalaasaha adduunka oo qaarkood, u noqday xoogga kicinta isbeddelada iyo caqabadaha. Xaaladdayadu markay tahay, waxaan sii wadnaa inaan wax barano - oo aan joojin - dhammaan faa'iidooyinka ay dunidan dijitaalka ah ku yaboohdo iyo muhiimadda ay leedahay ka mid noqoshada ilaha teknolojiyadeed ee shaqadeena guud.
Kadib wax ka badan 6 bilood oo ku noolaa Covid 19 masiibada, waxaan aragnaa warbixino badan, qalab iyo xalal ku saleysan warshadaha Geospatial ee lagula socdo viruska. Shirkadaha sida Esri waxay sameeyeen falanqaynta xogta iyo macluumaadka maaraynta aaladaha aad adigu heli karto si loo go'aamiyo ballaarinta. Marka, ereyga “Geospatial” ma waxaa la siiyay muhiimada Miyaan fahamsanahay awooda ay soo bandhigi karto?
Annaga oo og in aan mar hore galayno marxaladda 4-aad ee dhijitaalka ah, miyaynu hubnaa in aan wax ka qaban karno wax kasta oo xogta geospatial ay la micno tahay? Jilayaashu ma ku lug leeyihiin horumarka teknolojiyada, qabashada xogta, fulinta qorshayaasha iyo mashaariicda, runtii heerkan kacaan weyn?
Aynu bilowno inaan la yaabno haddii aasaaska waxbarashada, Akademiyada ay diyaar u tahay inay wax ka qabato caqabadaha jira da'da 4-aad ee dijitaalka ah. Aynu xasuusano waxa laga filaayay mustaqbalka 30 sano ka hor? Aan ka fikirno waa maxay doorka geosisiyoolajiyada cilmiga joomatikada maanta? Maxaa innaga sugaya sannadaha soo socda? Dhammaan su’aalahan oo dhan ayaa miiska lagu saaray Twingeo, gaar ahaan qodobka udub dhexaadka ah ee ka kooban mawduuca ugu weyn ee majaladda “aragtida Geospatial”.
“Waxa jira wareegyo qaraxyo oo ku cusub hal-abuurnimo. Haatan waxaan dooneynaa inaan aragno hal bilow ”
Waxaa jira weedh aad u xiiso badan oo ku habboon cabashada aan soo sheegnay, "In la ogaado meesha aan u soconno, waa inaad ogaataa halka aan ka nimid." Haddii aan rabno inaan ogaano, waxaa jira shaqo badan oo aan qaban karno.
Waa maxay nuxurka?
Daabacaadda dhaweyd waxay diiradda saareysaa "aragtida Geospatial", halkaasoo laga dheehan karo sida ay ahayd - iyo xaaladaha qaarkood sida loo rajeynayo inay noqoto - isbeddelka is-gaarsiinta ee ka dhexeeya bina-aadamka-teknoolojiyadda. Intooda badan inteena badani way cadahay in waxkasta oo aan qabano ay yihiin juquraafi ahaan dhulka, - xaqiiqdaadu waxay kuxirantahay dhulkii aan daganahay, taa micnaheedu waa in macluumaadka laga soosaaray aaladaha moobiilka ama noocyada kale ee dareemayaasha ay kujiraan qayb. Sidaa daraadeed, waxaan si joogto ah u sameyneynaa xog ku saabsan nolosha, taas oo noo oggolaaneysa inaan ogaano qaababka go'aan qaadashada ee heer degaan, heer gobol ama heer caalami.
Markii la sheegayo "Geospatial", badankood waxay la xiriiri karaan Nidaamka Macluumaadka Juquraafiga GIS, drones, sawirada dayax gacmeedka iyo kuwa kale, laakiin waxaan ognahay in taasi aysan kaliya aheyn. Ereyga “Geospatial” wuxuu ka kooban yahay wax kasta laga soo bilaabo hanaanka xog aruurinta iyo ku daridda wareegga AEC-BIM si loo gaaro dabagalka iyo faahfaahinta mashaariicda. Maalin kasta tikniyoolajiyado dheeri ah waxaa ku jira qaybta geospatial ee xalka ama wax soo saarkooda, ayagoo isu dejiyay inay tahay astaamo aan lagaran karin oo lagama maarmaan ah, laakiin daruuri maaha in sheygeedii ugu dambeeyay lagu soo bandhigi doono khariidad.
In kabadan 50 bog, Twingeo waxay uruurisaa wareysiyo xiiso leh oo kusaabsan shaqsiyaadka ka socda garoonka geospatial. Laga bilaabo Alvaro Anguix, Agaasimaha Guud ee gvSIG Association, oo ka hadlay "Halkee software free GIS ka socda".
Su’aal aan sifiican ugu jawaabnay markii aan ka soo qeybgalnay shirkii 15-aad ee Caalamiga ah ee gvSIG, halkaas oo aan qeyb ka nahay deegaan aqoonyahanno iyo aqoonyahanno juqraafiyeed oo muujiyey sheekooyinkooda guusha iyaga oo adeegsanaya qalabkan xoogga leh. Wuxuu iftiimiyay koboca la yaabka leh ee ay bulshada gvSIG ku yeelatay, hal caddeyn dheeraad ah oo lagu fahmo in isbedelka ku saabsan adeegsiga softiweerka bilaashka ah uu sii kordhayo waqti ka dib.
"Ka sakow ballaarinta adeegsiga GIS, tani waxay leedahay cawaaqib cad oo horey u jirtay xilligan xaadirka ah iyo in mustaqbalka dhow ay kordhin doonto." Alvaro Anguix
Mid ka mid ah arrimaha ugu murugsan ee la xiriira GIS waa doodda ku saabsan adeegsiga softiweerka bilaashka ah ama lahaanshaha, iyo faa'iidooyinka mid ama midka kale leeyahay. Xaqiiqdu waxay tahay waxa waxa falanqeeyaha ama xirfad yaqaanka cilmiga jirku ay aad u raadinayaan ay tahay in xogta la qabanayo ay tahay mid is dhexgal ah. Iyada oo ku saleysan tan, tikniyoolajiyadda si wax ku ool ah oo si hufan u siisa aaladaha si ay uga helaan macluumaadka ugu badan ayaa la dooran doonaa, haddii isla waqtigaas aysan laheyn qiimaha liisanka, cusboonaysiinta, dayactirka iyo soo dejintu waa bilaash, waa lacag dheeri ah in la tixgeliyo.
Waxaan sidoo kale raadinaa fikradaha shakhsiyaadka sida Wang Haitao, Madaxweyne kuxigeenka SuperMap International. Haitao waxay kaqeyb qaadatay daabacaadan 4aad ee Twingeo si ay u shaaciso faahfaahinta iyo fikradaha SuperMap GIS 10i, iyo sida aaladani u bixiso faa iidooyin balaaran ee ku saabsan sameynta xogta geospatial.
"Marka la barbar dhigo iibiyayaasha kale ee software-ka ee GIS, SuperMap wuxuu leeyahay faa'iidooyin waaweyn xagga xajmiga xayeysiinta Big Data iyo tikniyoolajiyadda cusub ee 3D GIS"
Iyada oo qayb ka ah mawduuca ugu weyn ee majaladda, Aqoonyahannada GIS ee Kanada Jeff Thurston iyo tifaftiraha daabacaado badan oo geospatial ah, ayaa ka hadlaya "Magaalooyinka Qarniga 101aad: Dhismaha iyo Kaabayaasha XNUMX."
Thurston wuxuu iftiiminayaa baahida loo qabo abuurida saxda ah ee kaabayaasha meelaha aan tixgelinaynin Metropolis, maadaama guud ahaan jilayaasha maxalliga ah ay diiradda saaraan hormarinta teknolojiyadda iyo baaxadda magaalooyinka waaweyn iyagoo soo bandhigaya: dareemayaasha, sirdoonka macmal - AI, mataanaha dhijitaalka ah - Mataanaha Digital, BIM, GIS , ka tagida aagag muhiim ah.
"Teknolojiyada ayaa dhaaftay khadadka xuduudaha, laakiin siyaasada GIS iyo BIM iyo maaraynta ayaa ku guuldareystay inay gaaraan nidaamkooda ugu sareeya ee isticmaalka iyo waxqabadka."
Dhiirrigalinta koritaanka xaafadaha iyada oo loo marayo soo bandhigista xalalka cusub ee loo yaqaan 'geospatial' cusub waxay fure u noqon kartaa gaarista deegaan caqli leh. Waxaan qiyaasi karnaa adduun macluumaad kaas oo lagu heli karo macluumaad isla markaana qaabaysan waqtiga dhabta ah, waxaan u maleynaynaa sidaas.
Sidoo kale waa in la sheegaa in Twingeo ay shaaca ka qaadday xeelado cusub, iskaashi iyo aalado ay kooxahani tikniyoolajiyadeed keenayaan sida:
Ku darista daabacaado cusub Machadka Bentley ee Nidaamka Bentley,
Vexcel, oo dhowaan soosaaray UltraCam Osprey 4.1,
Halkan iyo iskaashiga ay la leeyihiin Loqate, ee kobcinta gaarsiinta
Leica Geosystems oo ay la socoto xirmo cusub oo kumbuyuutar laser 3D ah, iyo
Daabacaadaha cusub ee Esri.
Heshiisyada udhaxeeyey Dowlada Scottish-ka iyo PSGA Geospace Commission
Isla mar ahaantaana, waxaad ka heli doontaa wareysiga lala yeelanayo Marc Goldman Director of Architecture Injineernimada iyo Xalka wershadaha dhismaha ee Esri United States. Goldman wuxuu muujiyey aragtidiisa ku saabsan is-dhexgalka BIM + GIS, iyo faa'iidooyinka uu cilaaqaadkani u keenayo is-dhexgalka Smart Cities. Tani waxay ahayd su’aal kale oo dhex martay khubaro ku xeel dheer dhismaha iyo geosyahanno, yaase ah labada ugu habboon ee maareynta xogta xaraashka iyo qaabaynta? natiijooyinka ugufiican.
"Si loo adkeeyo kartida buuxda ee BIM, isku-darka howlaha isku dhafan ee u dhexeeya BIM iyo GIS waa in la isku daraa." Marc dahabman
Sikastaba, Abuuritaanka ama sameynta Smart City ama Smart City waxay u baahan tahay quudin ku saabsan qeybta juquraafi ahaan. Dhammaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin waa inay ahaadaan kuwo si cad u qaabeysan - qaab-dhismeedka, dareemayaasha iyo kuwa kale-, ma noqon karaan nidaam go'doomin ah haddii aad rabto inaad ku daydo meesha bannaan intii suurtogal ah si waafaqsan xaqiiqada.
Isaga oo ka hadlaya BIM, warka weyn waa BIMcloud oo ah Adeeg ay bixiso shirkadda HARANKA GRAPHISOFT, oo loo yaqaan bixinta moodooyinka xallinta iyada oo loo marayo barnaamijkeeda hoggaamineed ee ARCHICAD, oo hadda ka go'an abuurista aalado kaydinta xogta ku saleysan ee daruuriga ah.
"BIMcloud adeeg ahaan waa sida saxda ah ee naqshadeeyeyaasha naqshadeeyayaasha u baahan yihiin inay uga guuraan shaqada guriga iyaga oo aan seegin wax garaac ah"
Daraasadda kiiska ee daabacaadan ayaa cinwaan looga dhigay "6 Arimood oo tixgelin la siinayo is dhexgalka Diiwaanka-Cadastre". Gudaha, qoraaga Golgi Alvarez - Tifaftiraha Geofumadas-, wuxuu sharraxayaa sida wadajirka ah ee u dhexeeya Cadastre iyo Diiwaanka Guryuhu ay u noqon karaan caqabad aad u xiiso badan oo ku saabsan hannaanka casriyeynta nidaamyada xuquuqda hantida.
Akhrin aad u wanaagsan, wuxuu nagu martiqaaday inaan isweydiino su aalaha ku saabsan jaangooyooyinka hanaanka cadastral, isbedelka farsamada diiwaangelinta, isku xirnaanta diiwaangelinta diiwaangelinta, iyo caqabadaha la wajihi doono mustaqbalka dhow.
Macluumaad dheeri ah?
Ma jiraan wax ka hadhay oo aan ahayn inuu kugu casuumo inaad ku raaxaysato aqrintaan, iyo inaad ku nuuxnuuxsato in Twingeo uu adiga ugu fiican yahay inaad hesho qodobbada la xiriira Geoengineering ee nuqulkiisa xiga, nagala soo xiriir emayllada editor@geofumadas.com y editor@geoingenieria.com.
Waxaan xooga saareynaa in hada joornaalka lagu daabaco qaab dhijitaal ah - dib u eeg Halkan-, haddii loogu baahan yahay jir ahaan dhacdooyinka, waxaa lagu weydiisan karaa adeegga daabacaadda iyo maraakiibta dalbashada, ama adigoo nagala soo xiriiraya emayllada hore loo bixiyay. Maxaad sugeysaa inaad soo degsato Twingeo? Naga soo raac LinkedIn si aad u hesho warar cusub.
Post Previous«Previous Leica Geosystems waxay ku daraysaa xirmo cusub oo ah baaritaanka laser 3D